सुपर स्लाइम ट्रेडिंग मास्टर3डी – slimy fidget धोखाधड़ी&ह्याक – Android धोखा दिन्छ
सुपर स्लाइम ट्रेडिंग मास्टर3डी – slimy fidget धोखाधड़ी&ह्याक
फिजेट स्लाइम ट्रेडिंगमा सामेल हुनुहोस् – सबैभन्दा लोकप्रिय कीरा व्यापार खेल र तपाइँको फोन मा शांत विरोधी तनाव fidgets.
नीरस squishy सिमुलेटर संग लोकप्रिय खेलहरु अब रमाईलो छन्? यो खेल तपाइँ निराश हुनुहुन्न निश्चित हुनुहोस्. रमाईलो व्यापार, ASMR प्रभाव संग अद्वितीय fidget खिलौने.
टेबल मा आफ्नो विरोधी तनाव कीचो राख्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाइँको प्रतिद्वंद्वी व्यापार मा प्रस्ताव गर्दछ. सहमत हुनुहुन्छ यदि सम्झौता उचित लाग्छ, वा squishies थप्न सोध्नुहोस्. Squishy slimes को आफ्नो सुपर संग्रह पाउनुहोस्!
तपाइँको विपक्षी को कार्यहरु लाई अनुमान लगाउनुहोस् ताकि धोका नदिनुहोस्. सबै भन्दा राम्रो व्यापार रणनीति पत्ता लगाउनुहोस् र तपाइँको ट्रेडहरु को अधिकतम बनाउन शुरू गर्नुहोस्.
एक नयाँ इंद्रधनुष स्लाइम को लागी तपाइँको कष्टप्रद slimes व्यापार गर्नुहोस्, दुर्लभ विरोधी तनाव कीचड़, असामान्य स्क्विश, चमकदार fidget वा हास्यास्पद कीचड़. यहाँ तपाइँ हरेक स्वाद को लागी खिलौने पाउनुहुनेछ! ट्रेडिंग को कला मा मास्टर र तपाइँको फोन मा सुपर स्लाइम ट्रेडिंग मास्टर संग विरोधी तनाव को खिलौने को सबै भन्दा ठूलो संग्रह प्राप्त गर्नुहोस्.
सोच्नुहोस् कीचड़ र fidget व्यापार तपाइँको लागी सजिलो छ? सबै भन्दा राम्रो व्यापारिक खेल मा परीक्षण को लागी तपाइँको कौशल राख्नुहोस्.
किन सुपर स्लाइम ट्रेडिंग मास्टर सबैभन्दा राम्रो फिजेट ट्रेडिंग खेल हो:
सरल र रमाईलो मेकानिक्स. तपाइँसँग मात्र तीन विकल्प छन्: स्वीकार गर्नुहोस्, इन्कार, र अधिक खिलौने माग. Fidget साझेदारी कहिल्यै सजिलो भएको छ!
एक रमाईलो, कौशल आधारित ट्रेडिंग गेमप्ले. तपाइँको संग्रह मा नाफा जोड्नुहोस्, तपाइँको ASMR विरोधी तनाव खिलौने को विविधता गुणा.
चिपचिपा खिलौने. कीरा को एक किस्म, स्क्विश खेलौना – हामी तपाइँले चाहेको सबै थोक छ.
तपाइँको मनपर्ने स्लाइम वा स्क्विश छनौट गर्नुहोस् र यसलाई विनिमयमा थप्नुहोस्. तपाइँ पक्कै यी विरोधी तनाव खेलौना संग आराम गर्न सक्नुहुन्छ.
के तपाइँ अझै सम्म सबै रोचक खेलौना खेल खेल्न कोसिस गर्नुभयो? सुपर स्लाइम ट्रेडिंग मास्टर मा addicting fidget ट्रेडिंग मात्र तपाइँ बोर हुन दिनुहुन्न. खेलमा आउनुहोस् र आफ्नो टाउको संग slimes र अन्य खेलौना को आदान प्रदान मा गोता.
कोटि: धोखा दिन्छ र ह्याक वा सल्लाहहरू ट्यागहरू: CheatsHack, Fidget, मास्टर, Slime, slimy, सुपर, Trading
← सुडोकु – धोखा दिन्छ&ह्याक FNF रात युद्ध – शुक्रवार Funkin संगीत ट्याप धोखा&ह्याक →